खजुरामा जनतासँग स्थानीय सरकार अभियान सरु – Radio Hatemalo FM
प्रकाशित मितिः २६ माघ २०७७, सोमबार १४:५५ February 8, 2021 हातेमालो संवाददाता
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा जनतासँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । जनताका समस्यासंग हातेमालो गर्ने र तत्काल समाधान हुने समस्या हल गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम चालु आर्थिक बर्षदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
उक्त कार्यक्रम अन्तरगत आज सोमवारदेखि जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालनमा ल्याईएको छ । भिजन आँखा अस्पताल नेपालगन्जको सहकार्यमा वडा नम्बर १ देखि ८ सम्म यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिने छ । शिविरमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सहभागी जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क चेक जाँच, औषधि बितरण र करिब एकसय जनाको निःशुल्क अप्रेशन गरिने जनाईएको छ ।
वडा नं. १ मा सञ्चालित शिविरको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले जनताका प्रत्यक्ष गुणासो सुन्ने र समस्या समाधान गर्न कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले समस्याको अवस्था हेरि तत्काल समाधान हुने खालका समस्यालाई हल गर्ने र समय लाग्ने खालका समस्याको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा लगिने बताउनु भयो । अध्यक्ष कक्षपतिले निर्वाचनमा जनतासंग बाचा गरेका ६५ बुँदा पूरा भएको र महत्त्वपूर्ण गौरवका योजना संचालनमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले तीन वर्षमा ५० किलो मिटर कालोपत्रे गरिएको जनाउँदै ५ वर्ष पूरा हुँदा १०० किलो मिटर कालोपत्र गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा खजुरामा १५ वेड १८ महिनामा पूरा गर्ने, दोस्रो ठूलो अस्पताल क्यान्सर अस्पताल पूर्ण सेवा दिने तयारीमा रहेको जानकारी दिनु भयो । ग्रीनसिटीमार्फत खजुराको व्यवस्थित विकासमा लाग्ने उद्देश्य रहेपनि कोरोनाले अवरोध भएको बताउँदै यो परियोजना सञ्चालनमा आउने विश्वास ब्यक्त गर्नु भयो । उहाँले असार मसान्तसम्म सुकुम्बासीको हातमा पूर्जा पर्ने गरी तयारी गरिएको बताउँदै कसैलाई एककप चिया खुवाउनु पनि नपर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
खजुरा गाउँपालिका सामाजिक बिकास संयोजक फत्तेकुमारी जैसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुदीप पौडेल, भिजन आँखा अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक बाबुतरुण गौतम, वडा नं. १ का स्वास्थ्य प्रमुख दीपक ढकाल, स्थानीय मगनसिंह थापाले यस्ता कार्यक्रमले जनता लाभान्वित हुने विश्वास ब्यक्त गर्नु भयो । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खराल, वडा नं १ का वडा अध्यक्ष सुमन मल्ल, वडा नं. २ का अध्यक्ष देवीलाल खनाल, खजुरा गाउँपालिका लेखा अधिकृत प्रदिप सुनार लगायतको सहभागिता थियो ।
नेकपा समर्थक `चुन्ना´ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा विजयी
भारतसँग गम्भीर कूटनीतिक प्रयास र छलफलबाट सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ:प्रधानमन्त्री ओली